အဆိုပါနယ်သာလန်လည်းရိုးရှင်းစွာ "ဟော်လန်" ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်, သို့သော်တရားဝင် "ဟုအဆိုပါနယ်သာလန်၏နိုင်ငံတော်" အဖြစ်လူသိများသည်။ ဒါဟာအနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင်တည်ရှိပြီးနှင့်ကာရစ်ဘီယန်အတွက်သုံးကျွန်းနယ်မြေများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ နယ်သာလန်၏ဥရောပတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရှေ့ဘက်အနောက်မြောက်ဘက်နှင့်ဂျာမနီမှတောင်ဘက်, အမြောက်ပင်လယ်မှဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်နယ်စပ်ချင်း။ ဒါဟာအစဂျာမဏီ, ဘယ်လ်ဂျီယံ, နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်အတူရေကြောင်းနယ်နိမိတ်ဝေမျှပေးသည်။
နယ်သာလန်ကော်ပိုရေးရှင်းကိုလည်း "ဟုအဆိုပါကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ" ဟုခေါ်သောအဆိုပါဒတ်ခ်ျကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာဥပဒေအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။ ထို့အပြင်လူထုအခြေပြုကျင့်ထုံးဥပဒေပု Securities မှကုန်သွယ်ရေး၏ကြီးကြပ်အပေါ်အက်ဥပဒေ, ဥရောပလူထုညွှန်ကြားချက်များနှင့်စာရင်းပေါက်ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအားဖြင့်လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
• နှစ်ဦးကရှယ်ယာရှင်များမှာ: နှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များ၏တစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးဆွဲသွင်းပါဝင်ဘို့လိုအပ်သည်။
• ဆန်ခါတင်သုံးပြီးသီးသန့်လုံခြုံရေး: ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်, ဒါရိုက်တာအမှန်တကယ်သူမြား၏ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
• အနိမ့် Authorized Capital ကိုအဘယ်သူမျှမ: 2012 ကတည်းကနယ်သာလန်ကော်ပိုရေးရှင်းမရှိတော့နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်တန်ဖိုးကိုကြေညာရန်ရှိသည်။
• shipping Hub: အဆိုပါနယ်သာလန်ကအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာအောင်, ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းများထဲကတစ်ခုရှိပါတယ်။
• နှစ်ချက်အခွန်ကောက်ခံမှုစာချုပ်များ: အဆိုပါနယ်သာလန်အတူတူဝင်ငွေအဘို့ကို double အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းကနေနိုင်ငံခြားသားတွေကာကွယ်တားဆီးဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံအများအပြားနှင့်အတူနှစ်ဆအခွန်စာချုပ်သဘောတူညီချက်များရှိပါတယ်။
• သာလွန်လုပ်သား: နယ်သာလန်နိုင်ငံအလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်သမားတစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်ရေးရှိပါသည်။ အဆိုပါလုပ်သားအင်အားနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူကြောင့်ဒီနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်နယ်သာလန်နိုင်ငံအရှိဆုံးအလားအလာန်ထမ်းနှစ်ဦးစလုံးလစာလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ဖြစ်ကြပြီးစကားပြောဆို အဂၤလိပ္.
နယ်သာလန်ကော်ပိုရေးရှင်းအခြားမည်သည့်ယခင်ကမှတ်ပုံတင်ကော်ပိုရိတ်များ၏အမည်များနှင့်ဆင်တူမဟုတ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့ကော်ပိုရိတ် name ကိုရှေးခယျြခဲ့ရပေမည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ထူးခြားတဲ့ဖြစ်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးတာနဲ့ကြောင့်ထိုနာမအဘို့လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်သူလျှောက်ထားသူက reserved ထားနိုင်ပါတယ်။
နယ်သာလန်ကော်ပိုရေးရှင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်နှင့်မှတ်ပုံတင်ဒေသခံလိပ်စာရှိရမည် တောင်းဆိုမှုများ နှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကသတိပေးချက်။
အဆိုပါနယ်သာလန်နယ်သာလန်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြားတစ်ဦးအပါအဝင်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဖြစ်တည်မှုအတွက်များစွာသောအခွန်နှစ်ထပ်နှစ်စာချုပ်များရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစာချုပ်များအတူတူဝင်ငွေအဘို့ကို double အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမှနိုင်ငံခြားသားများတားဆီး။
အဆိုပါနှစ်ပတ်လည်သက်တမ်းတိုးကြေး, € 1,500 မှ€2န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်500.
အဆိုပါကုန်သွယ်ရေးမှတ်ပုံတင်မည်ပြီးတော့အဲဒီမှာထည့်သွင်းဖြစ်ကြောင်းနယ်သာလန်အားလုံးကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိထားသူဖြစ်သောစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်အချို့ကယေဘုယျအားဖြင့်ပြဌာန်းအမည်, ဆွဲသွင်းပါဝင်, ဒါရိုက်တာ၏အမည်နှင့်အခွင့်အာဏာနှင့်မှတ်ပုံတင်လိပ်စာနေ့စွဲဖြစ်ပါတယ်ဖိုင်ပေါ်တွင်ထားရှိမည်။
ထို့အပွငျ 100% ရှယ်ယာရှင်များအပေါငျးတို့သအမည်များနှင့်လိပ်စာများအဖြစ်ကောင်းစွာကုန်သွယ်ရေးမှတ်ပုံတင်မည်ထားနေကြသည်။ ကုန်သွယ်ရေးမှတ်ပုံတင်မည်တွင်တွေ့ကုမ္ပဏီ၏သတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်အများပြည်သူသုံးစွဲနိုင်သည်။
သို့သော်အချို့ privacy ကိုများအတွက်အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များ၏အသုံးပြုမှုကိုရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများ privacy ကိုအချို့ဒီဂရီကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
နယ်သာလန်ကော်ပိုရေးရှင်းစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနည်းတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့နှင့်အခွန်ပြန်ဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များကိုလည်းတင်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များနှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျမှာရှယ်ယာရှင်များကအတည်ပြုခံရဖို့လိုအပ် အစည်းအဝေး.
နှစ်စဉ်ယေဘုယျအစည်းအဝေးအတွက်လိုအပ် နယ်သာလန် ကော်ပိုရေးရှင်း။
ဆွဲသွင်းပါဝင်များအတွက်လိုအပ်သောခန့်မှန်းအချိန်နှစ်ရက်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထဲဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုမှတဦးတည်းယူမျှော်လင့်ကြောင်းများသောအားဖြင့်အကြံပြုသည် ရက်သတ္တပတ်.
နယ်သာလန်ကော်ပိုရေးရှင်းအပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည်: နှစ်ခုသာရှယ်ယာရှင်များထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်, privacy ကိုဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ပေးအပ်လျက်ရှိ၏ မရှိလိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်တန်ဖိုးကိုဖြစ်ပြီး, နယ်သာလန်အတူတူဝင်ငွေပေါ်နှစ်ဆအခွန်ပေးဆောင်ဖို့ရှိခြင်းကနေနိုင်ငံခြားသားတွေကာကွယ်ပေးရန် (အမေရိကန်အပါအဝင်) မြောက်မြားစွာကို double အခွန်စာချုပ်များရှိပါတယ်။